अलमुताइरीले फेर्लान् त नेपाली फुटबलको भविष्य ? | सबै खेल
अहिले नेपाली फुटबल प्रेमीमाझ चर्चामा छन्- राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी । उनको व्यक्तिगत जीवन, विगत, प्रोफेसनल करियर, नेपाललाई लिएर उनको धारणा र उनको लक्ष्यका बारेमा चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ।
यहाँ हामी पनि चर्चा अलमुताइरीकै गर्नेछौं। तर, त्यसअघि नेपालको फुटबल इतिहासको कुरा गरौं।
नेपालमा फुटबलको इतिहास धेरै लामो छ। बेलायतबाट प्रभावित भएर सन् १९२१ मा राणाहरुले नेपालमा फुटबल खेल भित्र्याएका थिए । अर्थात् नेपालमा फुटबल खेल्न थालिएको ठ्याक्कै सय वर्ष भएको छ।
सुरुमा राणाहरुको दरबारमा मात्र खेलिने फुटबल विस्तारै दरबार वरपरका ठाउँहरुमा पनि खेलिन थालियो । त्यसबीच विभिन्न क्लबहरुको स्थापना भयो भने विभिन्न टुर्नामेन्ट पनि आयोजना हुन थाले।
१९३४ मा सुरु भएको राम जानकी कप, १९४८ बाट सुरु भएको त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्डलगायतका प्रतियोगिताले नेपालमा व्यावसायीक फुटबलको ढोका खोले।
स्थानीय स्तरमा यस्ता केही टुर्नामेन्ट आयोजना हुन थालेपछि मात्र सन् १९५१ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको स्थापना भयो । एन्फाको स्थापनासँगै नेपालले राष्ट्रिय टिम पनि पायो । तर नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न भने राष्ट्रिय टिम बनेको एक दशक पर्खनु पर्‍यो । १२ वर्षपछि सन् १९६३ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिष्य प्रतियोगिता खेल्यो, त्यो पनि विदेशी भूमिमा ।
त्यतिबेला नेपालले ढाकामा ‘अगा खान गोल्ड कप’ खेलेको थियो । त्यसबेला बंगलादेश भन्ने देश नै थिएन, ढाका पूर्वी पाकिस्तानमा पथ्र्यो। पूर्वी पाकिस्तानको ढाकास्थित बंगबन्धु नेशनल स्टेडियममा नेपालले वेस्टर्न रेलवेविरुद्ध विदेशी भुमिमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको थियो । त्यो खेलमा नेपाल७–०ले पराजित भयो । सोही प्रतियोगिताको दोस्रो खेल पनि नेपालले ढाका वन्डर्ससँग ७–०ले नै हा¥यो ।
अघिल्लो दुई खेलमा फराकिलो अन्तरले पराजित भएको नेपाल तेस्रो खेलमापनि सजिलै पराजित हुने सबैले अनुमान गरेका थिए ।तेस्रो खेल नेपालले ढाका पुलिससँग खेल्यो, सबैको अनुमानविपरित नेपालले ढाका पुलिसमाथि जित निकाल्यो । खेलमा प्रकाशविक्रम शाहले १९औं मिनेट गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो र नेपालले विदेशी भुमिमा पहिलो जित आत्मसाथ गर्‍यो।
त्यसयता नेपाली फुटबलले निकै लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । नेपाली फुटबललेठूलो उचाइ हासिल गर्न नसके पनि यात्रा निकै लामो र कठिन रह्यो।
१९५१ मा नेपालले राष्ट्रिय टिम त पायो, तर प्रशिक्षक पाउन तीन दशक कुर्नु प¥यो । नेपालले पहिलो प्रशिक्षकका रुपमा सन् १९८१ मा वेस्ट जर्मनीका रुडी गुटेनफडलाई पायो । उनले सन् १९८१ र १९८२ मा नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण दिए ।
८० वर्षमा ३९ प्रशिक्षक
१९८१ देखि अहिले सन् २०२१ अर्थात् ८० वर्षको अवधिमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले ३९ प्रशिक्षक पाइसकेको छ। नेपाली टिमको ३९औं प्रशिक्षकका रुपमा छन्, कुवेतका अब्दुल्लाह अलमुताइरी।
नेपाली फुटबल इतिहासमा इंग्ल्यान्डका ग्राहम रोबर्ट्स सबैभन्दा सफल प्रशिक्षक मानिन्छन्। उनले २०११ को साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई सेमिफाइनलसम्म पु¥याएका थिएभने खस्किसकेको नेपाली फुटबललाई नयाँ उचाइ दिएका थिए । रोबर्ट्सकै पालामा नेपाल पहिलोपटक विश्वकप छनोटको दोस्रो चरणसम्म पुगेको थियो ।
पछि ज्याक स्टेफानोस्की र बालगोपाल महर्जनले पनि नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलको यात्रा तय गराए । स्टेफानोस्कीले सन् २०१३ र महर्जनले २०१८मा नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याएका थिए।
बालगोपाल महर्जनले सन् २०१६ मा नेपाललाई बंगबन्धु कपको च्याम्पियन बनाउँदै २३ वर्षपछि ठूलो उपाधि दिलाउन सफल भए । २०१६ देखि २०१८ सम्म नेपालको प्रशिक्षक बनेका जापानका कोजी ग्योतोकुले २०१६मा नेपाललाई एएफसी सोलिडारिटी कप जिताए।
एसियन फुटबल कन्फिडेरेसन (एएफसी)ले आयोजना गरेको सोलिडारिटी कपको पहिलो च्याम्पियन नै नेपाल बनेको थियो भने एएफसीले आयोजना गरेको कुनैपनि प्रतियोगितामा नेपाल च्याम्पियन बनेको त्यो नै पहिलो र एकमात्र अवसर पनि हो।
यहीबीचमै कृष्णा थापा, राजुकाजी शाक्य, श्याम थापा, भीम थापा, थोमस फ्लाथ, विराटकृष्ण श्रेष्ठ, योगम्बर सुवाल, ध्रुव केसीलगायतका नेपाली प्रशिक्षकले पनि नेपाली टिम हेरे ।
अब कुरा गरौं ३९औं प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको–
कुवेती नागरिक अलमुताइरीको जन्म १८ डिसेम्बर १९८१ मा भएको हो । ब्याचलरसम्मको अध्ययन गरेका अलमुताइरीको दुई छोरा र एक छोरी छन्। सानै उमेरमा बुवा गुमाएका अलमुताइरी निकै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।
बुवा गुमाएपछि उनले ठूलाठूला होटलमा आउने गेस्टहरुको सुटकोस झोलालगायतका सामान बोकिदिने ‘बेल ब्वाइ’को रुपमा काम गरे। ‘बेल ब्वाइ’का रुपमा काम सुरु गरेका अलमुताइरी व्यावसायिक फुटबल खेलाडी हुँदै अहिले एएफसी कोचिङ इन्स्ट्रक्टरका साथै एएफसी प्रो लाइसेन्स होल्डर कोच बने।
नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक बन्नुअघि उनले कतारको अल साहिनी फुटबल क्लबको अन्डर २३ टिम र किर्गिस्तानको अन्डर १७ टिमलाई पनि प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यसबाहेक उनले साउदी अरब र कुवेतका विभिन्न टिममा पनि प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्।
अट्याकिङ फुटबल खेलाउन मनपराउने अलमुताइरीले प्रायः ४–३–३ फर्मेसन प्रयोग गर्छन्। भर्खरै सम्पन्न इराकविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि उनले नेपाललाई ४–३–३ कै फर्मेसनमा मैदानमा उतारे।
अलमुताइरी विश्व फुटबलका दुई प्रशिक्षकबाट निकै प्रभावित छन्। ती हुन्, मार्सेलो बिएस्ला र डिएगो सिमोनी। मार्सेलो बिएस्ला इंग्लिस प्रिमियर लिगको टिम लिड्स युनाइटेडका म्यानेजर हुन् भने सिमोनीस्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक।
बिएस्लाले लिड्स युनाइटेडलाई गत सिजन दोस्रो डिभिजनको च्याम्पियनसिपबाट बढुवा गरेर प्रिमियर लिगमा मात्र ल्याएनन्, उत्कृष्ट फुटबल खेलाउँदै प्रिमियर लिगका ठूला क्लबलाई आच्छुआच्छु बनाए । यस्तै डिएगो सिमोनीले रियल मडिड र बार्सिलोनाजस्ता टिम भएको स्पेनिस ला लिगामा यसपालि ७ वर्षपछि एट्लेटिको मड्रिडलाई च्याम्पियन बनाए।
अलमुताइरी आफू भने इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका कट्टर समर्थक हुन् । लिभरपुलकै लेजेन्ड स्टेभेन जेरार्ड उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने खेलाडी हुन्। अलमुताइरीले लिभरपुलबाट अफिसियल मेम्बरसिप कार्ड अर्थात् आधिकारिक सदस्यता परिचयपत्र समेत पाइसकेका छन्।
अलमुताइरी कसरी बने नेपालको प्रशिक्षक?
सन् २०१८ मा एन्फा र कतार फुटबल एसोसिएसनबीच नेपालको फुटबलको प्राविधिक विकास गर्न सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो। कतार र नेपालबीच सो मेमो¥यान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ(एमओयु)मा हस्ताक्षर भएसँगै एन्फाले कतारलाई प्रशिक्षक पठाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि कतारले नेपाली फुटबलको कुशलता अभिवृद्धिका लागि एएफसी प्रो लाइसेन्स होल्डर प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई छनोट गर्‍यो र नेपाल पठायो।
अलमुताइरीले एन्फासँग एक वर्षको सम्झौता गरेका छन् । अफसोच अलमुताइरीले नेपाल सम्हाल्ने यो एक वर्षको अवधिमा नेपालले धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने सेड्युल छैन।
अलमुताइरीको कार्यकालमा नेपालले कुवेतमा हुने विश्वकप छनोट, बंगलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी एसिया कप २०२३ को छनोट खेल्नेछ। यी खेलबाटै अलमुताइरीको परीक्षा हुनेछ।
अल्मुताइरी किन आए नेपाल ?
अलमुताइरीलाई कतारको फुटबल एसोसिएसनले जबर्जस्ती नेपाल पठाएको होइन् । उनीसँग नेपालको प्रशिक्षक बन्ने वा तुर्किमिनिस्तानको राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने भनेर दुईवटा विकल्प थिए, उनले नेपाल रोजे र यहाँ आए।
अलमुताइरीले भनेका छन्– ‘म नेपालको फुटबलका लागि नेपालीभन्दा बढी पागल छु । त्यसैले यहाँ आएको हुँ।’
उनले वास्तवमा झुट बोलेका होइनन्। नेपाल आउनुअघि उनले नेपालका हरेक खेलाडीको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको अध्ययन गरेर टिपोट गरेर आएका थिए। यसले उनलाई टिम छनोट र खेलाडीलाई व्यक्तिगत स्तरमा सिकाउन र विकास गर्न धेरै सहयोग गरेको छ।
अलमुताइरीकै आग्रहमा इराकको राष्ट्रिय टिम नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न राजी भएको थियो। नेपालले त्यो खेल ६–२ ले हारेपनि नेपालको खेलमा सुधारका धेरै संकेत देखिएको थियो।
केही समयअघि नेपालमा ट्राइनेशन्स कप आयोजना भयो, जसमा नेपाल च्याम्पियन भएको थियो । ट्राइनेशन्स कपका लागि किर्गिस्तानको यू २३ टिम पनि अलमुताइरीकै आग्रहमा नेपाल आएको थियो।
नेपालको मुख्य प्रशिक्षकको भुमिका निर्वाह गरेसँगै उनले एकपछि अर्को ठूला देशहरुसँग नेपाललाई खेल्ने अवसर जुटाइरहेका छन्। फुटबलमा जति धेरै खेल भयो, जति एक्स्पोजर पायो त्यति नै खेल राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपालका लागि अलमुताइरी एकदमै उचित प्रशिक्षक हुन्।
तुर्किमिनिस्तानको राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने अवसर लत्याएर उनी यसै विनाकारण नेपाल आएका पक्कै होइनन्। एसिया कपमा छनोट हुने सम्भावना नेपालको भन्दा तुर्किमिनिस्तानकै बढी छ। र, सफलता पाउने सम्भावना पनि उतै बढी थियो।
उनी नेपालको फुटबलमा नयाँ प्रयोग गर्दै भविष्यका लागि बलियो टिमको आधार तयार गर्न नेपाल आएका हुन्। उनले छनोट गरेको युवा खेलाडीले भरिपूर्ण राष्ट्रिय टिमले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ।
के हुन् अलमुताइरीका प्रारम्भिक लक्ष्य ?
साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको तीनपटक सेमिफाइनल खेल्नु मात्र हो। त्यसैले अलमुताइरीको मूख्य लक्ष्य साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पु¥याउनु हो।
साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल नेपाली फुटबल समर्थकका लागि सपना जस्तै हो । यदि फाइनलमा पु¥याएर अलमुताइरीले नेपाललाई साफ च्याम्पियन नै बनाए भने उनी नेपाली फुटबलमा ग्राहम रोबर्ट्सभन्दा सफल प्रशिक्षक बन्नेछन्।
यस्तै उनको अर्को लक्ष्य एसिया कप छनोट हो। तथ्यांक हेर्ने हो भने एसिया कप छनोटमा तेस्रो राउन्डसम्म पुग्नु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। तर, अलमुताइरीका लागि भने नेपाललाई एसिया कपमा छनोट गराउनु महत्वपूर्ण लक्ष्य र चुनौती रहनेछ।
कस्ता प्रशिक्षक हुन् अलमुताइरी ?
अब्दुल्लाह अलमुताइरी कसैको पनि आँखाको तारो बन्न नडराउने निडर प्रशिक्षकका रुपमा देखिएका छन्। नडमगाइ आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न सक्ने अलमुताइरी कसैलाई भने नराम्रो लाग्न सक्छन्, किनकी उनी तथ्यांकसहित तीतो सत्य बोल्न हिच्किचाउँदैनन्।
तर, खेलाडीका लागि भने उनी आइडियल प्रशिक्षक हुन्। उनले सुरुमै भनेका थिए– म आफ्ना खेलाडीलाई जोगाउन जुनसुकै हदसम्म पनि जानसक्छु । आइ विल डिफेन्ड माइ प्लेयर्स एट एनि कस्ट ।
उनले यो पनि भन्ने गरेका छन्– यदि कुनै खेल हारियो भने त्यसको जिम्मेवार म र केबल म मात्र हुनेछु । तर, नेपालले जितेमा त्यो जित केबल खेलाडी र नेपाली फुटबल फ्यानको मात्र हुनेछ।
यी दुई भनाईबाट नै बुझ्न सकिन्छ कि उनी एक आदर्श प्रशिक्षक हुन्।
यी हुन् अलमुताइरीका मान्यता
प्रशिक्षक अलमुताइरीको मान्यता छ, खेल जितियो भने त्यो सबै खेलाडीको क्षमता र योगदानले हो, कुनै एकजनाले गर्दा होइन। न त प्रशिक्षकले नै गर्दा हो।
उनी उपलब्ध स्रात साधानबाटे चाहेको नतिजा निकाल्न प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् । र, उनी आफ्नो असफलता अरुमाथि कहिल्यै नथोपर्न र बहाना बनाएर उम्किने प्रयास नगर्न आग्रह गर्छन्।
उनको अर्को मान्यता छ– कोही खेलाडी खतरा कोही कम जान्ने हुँदैन, जब देशको सवाल हुन्छ सबै खेलाडी समान हुन् । सिनियर खेलाडी होस् वा जुनियर, सबैले आफ्नो स्थान पाउन बराबर मेहनत गर्नुपर्छ ।
फुटबलमा आजको भोलि नतिजा नदेखिने बताउने अलमुताइरी राम्रो नतिजाका लागि धैर्य गर्न सिक्नु पर्ने र आजको हाम्रो मेहनतले दुई वर्षपछि फल दिनसक्ने बताउँछन्।
नेपालको राष्ट्रिय टिमका लागि उनले केबल तीन महिनाको समय मागेका छन् । तीन महिनामा खेलको स्तर सुधार्ने उनले दाबी गर्दै तीन महिना धैर्य गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनको दाबी मिथ्या होइन भन्ने इराकविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको प्रदर्शन हेरेर बुझ्न सकिन्छ। तर, खेलाडी र प्रशिक्षकको खास परीक्षा मैत्रीपूर्ण खेल होइन, प्रतिस्पर्धात्मक खेल हो।
हुन त अलमुताइरीले मागेको तीन महिनाको समय भर्खरै सुरु भएको छ। तर उनले आफूले भने बमोजिम नेपालको टिममा कति सुधार ल्याउँदै छन् भन्ने कुराको केही संकेत आसन्न विश्वकप छनोटमा नेपालले गर्ने प्रदर्शनबाट थाहा हुनेछ, र उनको परीक्षा पनि त्यहिँबाट सुरु हुनेछ।
नेपालले आफूभन्दा निकै स्तरीय टिम चाइनिज ताइपेइ र जोर्डन तथा ५ पटक विश्वकप फुटबलमा सहभागी भइसकेको टिम अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यी खेल अलमुताइरीले नेपाली फुटबल समर्थकलाई दिलाएको विश्वास र उनले नेपाली खेलाडीमाथि गरेको भरोसाको परीक्षाको घडी हो।
मेसीले बार्सिलोनासँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने !
बेन्जिमाको पुनरागमन खेलमा फ्रान्स विजयी